Kedu ka teknụzụ siri metụta Ecommerce n'oge 2016 | ECommerce ozi ọma
Kedu ka teknụzụ siri metụta Ecommerce n'oge 2016
Susana Maria Urbano Mateos | | Ọzụzụ ECommerce, Nkuzi na akuru
El ike ịzụta nke ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị ọ tolitere n'ezie na nsonaazụ ya dị ịrịba ama. Mana enwere otutu ihe na e-commerce karia nani ahia. Na mmetụta nke teknụzụ na ecommerce N'oge 2016, enyela anyị ohere ịgbanwe n'ọtụtụ ebe ma bulie arụmọrụ na ọrụ.
1 Uzo ahia nke uwa
2 Ọnụ ahịa ndị ahịa zuru ezu
3 Ụdị ahịa ọhụrụ
4 Comgwé ojii Comput
5 The mobile ikpo okwu
Uzo ahia nke uwa
Teknụzụ ọ dị mkpa ịhapụ ụlọ ọrụ ka ha gbasaa ọrụ ha na ahịa ọhụrụ. Dị SaaS bụ isiokwu a ma ama iji bulie oge iji zụọ ahịa ma belata ihe ize ndụ nke itinye n'ọrụ. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enye onyinye SaaS na-eweta iji zute mkpa ahịa dị iche iche.
Ọnụ ahịa ndị ahịa zuru ezu
na trading nyiwe teknụzụ na-enye njikọ dị mkpa na ndụ ndụ ndị ahịa niile. Nke a gụnyere ịzụ ahịa, ire ahịa, ọrụ ndị ahịa, yana ijigide ya ọwa ntanetị na ntanetị. Azụmaahịa Ecommerce na-enye ndị ahịa ha ahụmịhe na enweghị nsogbu.
Ụdị ahịa ọhụrụ
na Ecommerce teknụzụ nyiwe ha na-amụkarị iji kwalite ụdị azụmaahịa ọhụrụ na ọwa ahịa maka ụlọ ọrụ. Nke a emeela usoro eji emepe maka ndị mmekọ ibe maka imekọ ihe ọnụ, ahịa na azụmahịa ọhaneze.
Comgwé ojii Comput
El Cloud Computing O metụtawo ecommerce na usoro nke ọnụ ala nke ikike na ịdị ukwuu. Nke a emeela ka ụlọ ọrụ e-commerce gbanwee ma jiri ohere dị ukwuu na-azaghachi ohere.
The mobile ikpo okwu
N'ihi na ọtụtụ ulo oru, karịsịa retail nke, lSmartphones ugbu a bụ ọnụ ụzọ ámá maka ụdị. The mobile n'elu ikpo okwu dị ka a ọwa toro ngwa ngwa na-adịbeghị anya, na online ịzụrụ si mobile chụpụrụ ịzụrụ si PC. Ekwentị na-adịkarị mkpa na ịnye ọbịbịa na nleta nleta na ọchụchọ na-arịwanye elu maka onyonyo, ọnọdụ, ịkwụ ụgwọ ekwentị yana ọrụ ọchụchọ dabere na olu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Nkuzi na akuru » Kedu ka teknụzụ siri metụta Ecommerce n'oge 2016
Etu esi eji Twitter bulie azụmahịa Ecommerce gị
Ajuju tupu ị mee ecommerce